မျက်ကြည်လွှာအပြင် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို ပါ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ခင်ရတနာစိုး……. – Cele Oscar
မျက်ကြည်လွှာအပြင် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို ပါ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ခင်ရတနာစိုး…….
September 2, 2021 By L YC Knowledge
ပရိသတျကွီးရေ ခငျရတနာစိုး ကတော့ The Voice Myanmar အစီစဉျမှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျပါ။ ခငျရတနာစိုးက ဒီနစေ့ကျတငျဘာလ ( ၂ ) ရကျနမှေ့ာတော့ လူတိုငျးမလုပျနိုငျတဲ့ အလှူလေးတဈခု ကို မှေးနအေ့ထိမျးအမှတျ အ နနေဲ့ လှူဒါနျးပေးခဲ့ပါတယျ။
လာမယျ့ စကျတငျဘာလ (၁၁) ရကျနမှေ့ာတော့ ပရိတျတှရေဲ့အခဈြတျော ခငျရတနာစိုးရဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျ ကရြောကျတဲ့ နရေ့ကျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ခငျရတနာစိုးကတော့ မှေးနရေ့ကျမတိုငျခငျ ဒီနမှေ့ာပဲ မှေးနေ့ အထိမျးအမှတျအနေ နဲ့ သူသလှေနျသှားတဲ့ အခါ သူ့ရဲ့မကျြကွညျလှာ နဲ့ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါ (အသညျးနဲ့ ကြောကျကပျ) တို့ကို လူမှုအကြိုးပွုလုပျငနျးတှေ အတှကျ ပရဟိတအသငျးတဈခု ကနေ တဈဆငျ့ လှူဒါနျးပေးခဲ့ပါတယျ။
ခငျရတနာစိုးရဲ့ မှေးနအေ့ထိမျအမှတျအနနေဲ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ မကျြကွညျလှာနဲ့ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါ လှူဒါနျးမှုလေးက လူတိုငျးမလုပျနိုငျတဲ့ တကယျကို မှနျမွတျလှတဲ့ အလှူလေးပါပဲနျော။ပရိသတျကွီးတှလေညျး ခငျရတနာစိုးရဲ့ မှနျမွတျလှတဲ့အလှူလေးကို သာဓုချေါဆိုနိုငျဖို့ မြှဝဖေျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source – Khin Yadanar Soe
ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်ရတနာစိုး ကတော့ The Voice Myanmar အစီစဉ်မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ခင်ရတနာစိုးက ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ ( ၂ ) ရက်နေ့မှာတော့ လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ အလှူလေးတစ်ခု ကို မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အ နေနဲ့ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် စက်တင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှာတော့ ပရိတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ခင်ရတနာစိုးရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ် ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ရတနာစိုးကတော့ မွေးနေ့ရက်မတိုင်ခင် ဒီနေ့မှာပဲ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေ နဲ့ သူသေလွန်သွားတဲ့ အခါ သူ့ရဲ့မျက်ကြည်လွှာ နဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ (အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်) တို့ကို လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ အတွက် ပရဟိတအသင်းတစ်ခု ကနေ တစ်ဆင့် လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ခင်ရတနာစိုးရဲ့ မွေးနေ့အထိမ်အမှတ်အနေနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မျက်ကြည်လွှာနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ လှူဒါန်းမှုလေးက လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ တကယ်ကို မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလေးပါပဲနော်။ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ခင်ရတနာစိုးရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့ မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သူမပုံတွေကိုယူသုံးပြီး မိဘတွေကိုစော်ကားပြောနေတာကြောင့် Live နဲ့ရှင်းပြရင်း ရှိုက်ကြီးတင်ငင် ငိုကြွေးနေတဲ့ နွေးနွေးချစ်ဖွယ်…..
မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ တစ်မျိုးလှပနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး စံရတီမိုးမြင့်…….